Macalinka Kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo Ka Hadlay Jose Mourinho Ka Hor Ciyaarta Manchester United iyo Liverpool | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(16-12-2018) Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka hadlay dhigiisa Manchester United ee Jose Mourinho iyo ciyaarta ay wada ciyaaridoonaan maalinta axada ee soo socota.
Klopp ayaa sheegay in Mourinho uu yahay macalinka ugu guulaha badan caalamka balse maanta uuna lahayn hami uu ku qaado horyaalka iyadoo farqiga dhibcaha u dhexeeyaa uu yahay 16 dhibcood.
Labadan kooxood ayaa maalinta axada ku wada ciyaaridoona garoonka Anfield ee kooxda Liverpool iyadoo labadii ciyaarood ee ugu danbeeyey ee ay ku wada ciyaaraan Anfield ay ku kala baxeen barbar dhac.
Dhanka kale Manchester United ayaa doonaysa in ay soo afjarto guuldarooyinkii mudooyinkii danbe ay ku soo jirtay xiliciyaareedkan, halka Liverpool ay doonayso in ay sii adkaysato hogaanka iyo in ay difaacato guulaha xidhiidhka ah ee aan marna laga badin intii uu horyaalku socday.
Klopp ayaa sheegay in Manchester United ay haysato ciyaar yahano fiican oo tayo leh sida goolhayaha David De Gea oo ay adag tahay sidii gool looga dhalin karo iyo ciyaaryahano kale oo badan isagoo tilmaamay kuwa weerarka uga ciyaaraya iyo waliba bedalka fiican ee uu haysto Mourinho, balse waxa uu sheegay inay ku dagaalamayaan sidii ay saddexda dhibcood uga heli lahaayeen dhigiisa Manchester United.
Ugu danbayntiina Klopp ayaa sheegay isagoo la hadlaya ciyaaryahanadiisa in looga baahan yahay in ay ku soo galaan inay guul ka keenaan ciyaarta una ciyaaraan sidii niman cadhaysan oo kale, waayo maanta waxaa la joogaa xiligii aynu ka guulaysan lahayn Manchester United.